Le nkonzo online free. imigangatho Self-sokulinganisa
Ukubala izinto kumgangatho self-embeka
isikali umzobo 1: 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ububanzi isithuba X
ubude igumbi Y
Ebubanzini ubuncinane F
Ukubalwa kumgangatho self-sokulinganisa
X - ububanzi isithuba
Y - ubude igumbi
Qhuba ngumlinganiso umahluko ukuphakama ezimbombeni zone gumbi, apho amanqaku A, B, C, D.
Ukwenza oku, sebenzisa inqanaba yokwakha.
Cwangcisa Ebubanzini ubuncinane kumgangatho self-sokulinganisa. Le ubungakanani kuya ngokuzenzekelayo kusetyenziswa kwindawo kwelona gumbi.
Ngenxa yoko, imali izinto ezifunekayo cubic wazifaka ukuphakama xa iimbombo gumbi ziza kubalwa.
Le nkqubo iqwalasela isixa izixhobo umgangatho self-ukugudisa esekelwe umahluko yobude ezimbombeni.
Uya kuba nako ukubala ngokuchanekileyo ngaphezulu iindleko zezixhobo.
Eyona uncedo self-ukugudisa kumgangatho ukuba screed ezizodwa, apho kusetyenziswa ukudala kumphezulu tyaba kwaye zingabi mgudu engaphezulu indima yakho. Yiloo nto imigangatho enjalo namhlanje ndizuze ukuthandwa okhethekileyo.
Galela imigangatho kunokuba ngokuzimeleyo. Yonke into efunekayo kukuba ukwazi ubude nobubanzi gumbi, ukuphakama kwayo ezimbombeni, ngokunjalo Ebubanzini esezantsi nihluthe umaleko, ngoko inkqubo yethu siza kuba nako ukubala umthamo eziphathekayo ukuba ugcwalise kwimboniselo uyithobele.
Eziluncedo imigangatho athontelana
1. Umphezulu ngokwesini Ndikulinganise, ngaphandle beentanda okanye izikhewu.
2. Ubomi imigangatho self-ukugudisa uzayo iminyaka 40-50.
3. Ixesha elide.
4. Aziphili inkathalelo eyodwa.
Sophawu kumgangatho filler yinto elula, ngoko abaninzi bakhetha yokuyenza ngokwakho ngaphandle kokubhenela iingcali. Kodwa apha kukho ezinye zaso.
Ngoko ke, ngaphambi kokuba uqale ngokubekwa emgangathweni kufuneka ukulungiselela igumbi. Ukwenza oku, susa ukutyibilika ubudala, neebhedi kunye ucango. Umphezulu phantsi endaweni. Oku kwenziwa ngokusebenzisa umatshini sanding eyodwa okanye ucingo ngebrashi. Ngoko, ukuba kukho iintanda emhlabeni, baya Nokuchaza usebenzisa scraper elingunxantathu.
Khumbula ukuba, ukuba uza ukubeka inkcitha phezu komgangatho ngomthi, kufuneka yomelezwa kunye okhethekileyo pre-grid.
Emva koko, usebenzisa angle emgangathweni Iimfanta ukuthambeka ilinganiswa. Ngokwala imilinganiselo ezindongeni wenza uphawu, ukuphakama komgangatho buya kuphalazelwa leyo. Kule ukuphakama, kunye iisentimitha 2.5, iindonga ziyacocwa westucco kunye nezinye izinto iphele.
Ngoko kwakhona, umgangatho yococeko degreased kunye ngumgubo okhethekileyo.
Ngoku kumgangatho zangqinelana isisombululo eziqatywe iintanda nemingxuma, etyeneneza nezitenxo. Emva koko, umgangatho kufuneka primed. Kwaye ngeli zokuzilungiselela nqanaba lugqityiwe. Nawe ungaqala ngokubekwa emgangathweni.
Ngokubekwa emgangathweni inkcitha
Ukuze baluphose phantsi ngokulinganayo kuthabatha oncedisayo baya kuzixuba isisombululo ude zalisa.
Lungisa isisombululo njengoko imiyalelo package. Ukuba le ngxaki ya efanayo, musa itanki ekunene bonke amanzi. Makhe oku kuba yinxalenye enkulu kuyo. Oku baxovula isisombululo. Ukwenza oku kuhle ukusebenzisa drill zombane kunye esatsiba okhethekileyo. Kwaye kuphela xa isisombululo aya kujika kukwinto bomzi, ugalele amanzi usindileyo.
Sex obuphalazelwe kwicala lwe emnyango, kwathabathela ekujikeni icala ukusuka emnyango ukuya kwisakhiwo. Umxube batyhileka kwi izabelo, ngamnye emva ilungelelanise komhlaba kunye irola spiked. Oku kunceda ukususa amaqamza osenokuba wangena isisombululo nokubonelela yisoma efanayo.
Usongezelela ukusuka isabelo omnye komnye ixesha akufunekanga kwimizuzu ngaphezu kwama-10.
Ngexesha yaphuse emgangathweni, kwaye 3-6 iiyure ngokuxhomekeke igama isisombululo kwaye uphephe iidrafti kwi utshintsho lobushushu egumbini.